Ndị ọgbaa bọọlụ na Yurop na-enyeghi goolu ọbụla n'afọ a - BBC News Ìgbò
Ndị ọgbaa bọọlụ na Yurop na-enyeghi goolu ọbụla n'afọ a
22 Mee 2018
Ebe foto si, Getty Images
Yaya bụ nwafọ Ivory Coast mabuterela ihe nrite ọkacha agba n'Afrịka
Egwuregwu bọọlụ nke afọ a akwakọrọla ọnụ na mba Yurop mana enwere ụfọdụ ndị ama ama na-enyetaghị goolu ọbụla n'otu ha dị icheiche.
Ndị nke na-agba bọọlụ n'Ịngland gụnyere Yaya Toure nke Manchester City, Michael Carrick nke Manchester United, Yohan Cabaye nke Crystal Palace.
Na Spen ha bụ Andres Gomes nke Barcelona, Mateo Kovacic nke Real Madrid, Sulley Muntari nke Deportivo La Coruna.
Gịnị ka Yaya Toure ga-eme ugbua?
Chelsea egosila Man Utd nkarị ma bulie iko FA
Onye ọgba n'etiti a gbachara bọọlụ nke afọ a na-enyeteghi otu goolu ọbụla n'asọmpi niile dịka ọ kwụsịrị ịgbara Manchester City bọọlụ. O nyere goolu dị 62, enyemaka dị 32 n'ime asọmpị 230 ọgbara otu ya na Premier League.
Gụọ akụkọ a n'uju ebe a
Onye ndu otu Manchester United mechiri afọ 2017/2018 na-enyeteghi goolu ọbụla. Onye ọgba n'etiti a dị afọ 36, kwuru na ọ gbachala n'ọgụgụ afọ, gbara asọmpi dị 463 mabute iko dị 12 na Manchester United.
Onye ọgba n'etiti a gbaara ndị otu Eagles bọọlụ ugboro 30 na-enyeghị goolu ma ọ bụ enyemaka ọbụla. N'oge ya niile n'asọmpi Premier League dị 174 ọgbara, o nyere goolu dị 26.
Andres Gomes - Barcelona
Onye ọgba n'etiti ndị Barcelona mechiri afọ a na-enyeghi goolu ọbụla n'asọmpi 34 ọgbara. Agbanyeghi na nwafọ mba Portuguese nyere goolu mgbe barcelona zutere ndị Mamelodi Sundown na Johannesburg n'ọnwa Mee.
Onye ọgba n'etiti ebe ihu a chere n'asọmpi ikpeazụ europa league iji nyeta otu ọkpụ goolu n'afọ a. Gabi gbara asọmpi dị 51 n'afọ a. Nwafọ Spen gbaara asọmpi 400 na Atletico Madrid nakwa Zaragoza.
Nwafọ mba Kọrọsịa gbara asọmpi dị 32 na Real Madrid na-enyeghi goolu ọbụla.
Sulley Muntari - Deportivo La Corina
Ọgbaara ndị Deportivo asọmpi ugboro asatọ n'ime afọ na-enyeghi ọkpụ goolu ọbụla.
Onye ọgba bọọlụ n'etiti azụ gbaara ndị PSG asọmpi ugboro 19 n'afọ a na-enyeteghi otu goolu. Nwafọ mba Fransị gbaara otu egwuregwu dịka Real Madrid, Chelsea na Arsenal bọọlụ.
Okechukwu Azuibuike - Yeni Malatyaspor
Azuibuike bụ nwafọ Naịjirịa na-agba bọọlụ n'asompi mbụ ndị Turkey. Mana ọgba bọọlụ n'etiti a bụ onye ndu otu Malatyaspor enyeghi goolu ọbụla n'ime asọmpi 26 ọgbaara otu ya.
Onye ọgba n'etiti ndị Liverpool nyere goolu asa n'ime asọmpi 36 ọgbara n'afọ gara aga. Mana o nyebeghi goolu ọbụla n'afọ a agbanyeghi na ọ gbaala asọmpi dị 33.
Nke bu ụzọ
Nke so ya
Ndị nwe Foto ndị a
Ndị nke na-agba na Fransị bụ Lassana Diarra nke PSG.
Nwafọ Naịjirịa na-agba bọọlụ na Malaysia bụ Okechukwu Azuibuike so na ndị a.
Barcelona amabutela iko La Liga
Eze bụ Pep Guardiola naanị ọchị taa
Vidio, Ọ dịghị mfe ị bụ nwaanyị na-agba mkpọnala - Anthonia Ogugua
elekere 2 gara aga
nkeji 43 gara aga
Vidio, Nwamadị ji atịtị akwa nka, lee ka o si eme ya
12 Mee 2021
A chụọla Jose Mourinho dịka onye nchịkọta Tottenham
19 Eprel 2021
West Brom emeela Chelsea tụtụrụ fụchaa, gbaa ha ọtọ ka ụwa hụ
3 Eprel 2021
Kennedy Nzechukwu bụ onye akpụ n'ọnụ ugbua n'asọmpị UFC 259
7 Maachị 2021
UFC 258: Kamaru Usman akụọla Gilbert Burns ihe 'Tinka kụrụ Pan'
14 Febụwarị 2021
Leicester City vs Liverpool: Leicester City ayọọla Liverpool ka akpụ nọrọ abalị atọ
13 Febụwarị 2021
Ihe ndị ị maghị maka ndụ Father Ejike Mbaka n'okorobịa
7 Mee 2021
Lee etu ọtụtụ ụlọọrụ gọọmentị si fanye ego na bọjeetị 2021
4 Mee 2021
Vidio, Nigeria's inflation 2021: 'Oke agụụ na-abịa maọbụrụ...', Duration 5,35
22 Eprel 2021
Ihe ndị ị na-eme nwere ike iduba gị n'ọrịa 'Kidney disease'
'Ndị omeiwu Naịjirịa na-aghọrọ onwe ha aghụghọ ịsị na ha ga-edegharị akwụkwọ iwu'
'Ihe kpatara agha Biafra amalitela ime ọzọ ugbua' - Joe Igbokwe
Ihe mere Rev Fr Ejike Mbaka ji mechie 'Adoration Ministry' ruo otu ọnwa
Ị ma na e nwere ndịịche dị na ọfọ, ọfọ ndị ichie na mkpụrụ ọfọ?
Ọ bụghị eziokwu na Nnamdi Kanu gbara ọsọ na Briten - Ipob
Etu e si gbuo otu nwaanyị na ndị ọzọ n'Ozubulu
Etu e si nwụchie ndị e chere na-ere akwụkwọ mgbasaozi Ipob n'Owerri
NBC akụsuola NTA, Channels TV, AIT nakwa TVC maka okwu asị
Emelitere ikpeazụ na: 30 Jenụwarị 2019
Bobrisky na etu mgbanwe ya ji malite
Emelitere ikpeazụ na: 31 Ọgọọst 2020